विस्व प्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ : MCC बारे सुनेको भरमा टि’प्पणी नगर्नुस् ! अक्ष’रश, पढ्नुस् र धा’रणा बनाउनुस्…हेर्नुहोस् ।::Point Nepal
विस्व प्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ : MCC बारे सुनेको भरमा टि’प्पणी नगर्नुस् ! अक्ष’रश, पढ्नुस् र धा’रणा बनाउनुस्…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ : नेपाली कांग्रेसका प्र’वक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एमसिसी पास भए अमेरिकी से’ना नेपाल पस्ने कुरा नि’राधार भएको बताएका छन्। कांग्रेस झापाले आज यहाँ आयो’जना गरेको का’र्यक्रममा उनले भने !
अमेरिकाले विश्वका कुनै पनि मुलु’कमा अनु’मति मागेर प्र’वेश गरेको छैन, इ’राकमा पनि अ’नुमति लिएर प्रवे’श गरेको होइन। अमेरिकी से’ना पस्ने हल्ला निरा’धार हो। सुनेको भरमा टि’प्पणी गर्ने प्र’चलनले एमसिसी ग’लत हो भन्ने आ’मजनधार’णा बनेको उनको भनाइ थियो ।
अक्षरशः पढ्नुस्, अनि एमसिसी सम्झौ’ता का’र्यान्वयनका बारे धार’णा बनाउनुस्, यो राष्ट्रि’य हि’तमा भए हितमा छ भन्नुस्, नभए छैन भन्नुहोस्”, उनले भने “सुनेको भरमा धा’रणा बनाउनु हुँदैन।” मु’लुकको वि’द्युत् प्र’सारण लाइन विस्तार,
उत्पा’दित बि’जुली बि’क्री–वित’रणका लागि एमसिसी परि’योजना ला’भदायी हुने उनको भनाइ थियो। प्रवक्ता शर्माले सरकारले को¥रोना परी’क्षणमा प्र’भावकारी का’र्य गर्न नस’केको आ’रोप पनि लगाए।
यता, को’रोना सङ्क्र’मणको जोखि’मबाट जन’धनको सु’रक्षा गर्न माग गर्दै नेपाली का‌ग्रेस झापाले सरकारलाई ज्ञाप’नपत्र बुझा’उने भएको छ। के’न्द्रीय स’मितिको नि’र्देशनबमोजिम का‌ग्रेस झापाले असार २ गते जिल्ला प्र’शासन का’र्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञा’पनपत्र पठाउने नि’र्णय गरेको पा’र्टीका झापा सभापति उ’द्धव थापाले बताए।
ओली सरकार ५ वर्ष टिक्ने र इतिहास रच्ने सांसद नविना लामाको घोषणा।
प्रधानमन्त्री ज्यु, पार्टी ब’च्यो पद बच्यो अब आउनुहोस् जनता बचाऔं! रबि लामिछाने
एमसिसि पास गरेर ओलीमुक्त देश बनाउनुपर्छ अनि मात्र बिकाश हुन्छ – नेता खतिवडा
दिपक मनाङ्गे फ्याउरे गुण्डा हुन, त्यो भन्दा ठुलो आतंककारीहरुले देशमा राज गरिरहेका छन्ः रमेश खरेल पूर्व डिआईजि
नागरिकको जीवनरक्षा नै यो सरकारको पहिलो दायित्व हो :भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली